जे माग्यो तेहि पूरा हुने अचम्म परम्परा भएको मन्दिर जहाँ नाग र बाघले गर्छन मन्दिरको रक्षा ! जसले भिडियाे हेरेर भगवानकाे दर्शन गर्छ उस्काे मनाेकामना पूरा हुनेछ (हेर्नुहोस भिडियो) - Nepal Aawaaj
जे माग्यो तेहि पूरा हुने अचम्म परम्परा भएको मन्दिर जहाँ नाग र बाघले गर्छन मन्दिरको रक्षा ! जसले भिडियाे हेरेर भगवानकाे दर्शन गर्छ उस्काे मनाेकामना पूरा हुनेछ (हेर्नुहोस भिडियो) । हिन्दू धर्म वा सनातन धर्म (धेरै समयदेखि चलिआएको) धर्म जुन हालसम्म चलिआएको छ। हिन्दू धर्मको विशेषता यस भित्रका बिभिन्न आस्था र विश्वासका स्रोत हुन् ।
९० हजार वर्षभन्दा पहिला यो धर्मको प्रारम्भ भएको थियो । रामायण, महाभारत र पुराणहरूमा सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाहरूको वंश परम्पराको उल्लेख उपलब्ध छ । यसका अतिरिक्त अनेक वंशहरूको उत्पति र परम्पराको वर्णनमा पनि हिन्दु धर्मको उतपत्तिका विषयमा कुराहरु आएका छन् । आर्यहरूको सभ्यतालाई वैदिक सभ्यता मानिन्छ ।
पहिलो दृष्टिकोण अनुसार लगभग १७०० ईसा पूर्वमा आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पञ्जाब र हरियाणामा बसोबास गर्ने गर्थे । त्यस बेला देखि नै उनीहरूका विद्वान् ऋषिहरु आफ्ना देवताहरूलाई प्रसन्न गर्नलाई वैदिक संस्कृतमा मन्त्र रचना गर्न थाले । पहिला चार वेद रचियो, जसमा ऋग्वेद प्रथम थियो । त्यस पछि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उपनिषद जस्ता ग्रन्थहरू आए ।
हिन्दु धर्मको उत्पत्ति वैदिक संस्कृतिबाट इशापूर्व २००० वर्षभन्दा पहिला भएको मान्यता छ । सङ्ख्याको हिसाबले यो विश्वको तेस्रो ठूलो । हाल विश्वमा हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरु १ खर्ब ५ अर्ब छन् । जस मध्ये ९६% दक्षिण एसियामा छन्। हिन्दू शास्त्रहरूलाई दुई भागमा बाँडिएको छ श्रुति र स्मृति । श्रुति भन्नाले वेद बुझिन्छ जुन हिन्दूहरूको धर्मग्रन्थ हो अथवा हिन्दूहरूको संविधान हो ।
स्मृतिअन्तर्गत इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत तथा विभिन्न स्मृतिहरू पर्दछन् । वेदको सार उपनिषद हो भने उपनिषदहरूको सार गीता हो । मान्छेहरु भन्ने गर्छन संसारमा भगवान छैन्न भनेर तर केही विष्लेशकहरु बताउछन भगवान साँच्चीकै छन। संसारमा सत्य युगको कुराकानी गर्दा भगवान छन ।
साँच्चीकै भगवान-भगवान बिच प्रतिसप्रधा भयको थियो कमलको फुललाई शुद्ध मानिन्छ । सबैले भन्छन कमलको फुल माथी देवी देवता बस्छन भनेर । संसारमा आधा जनसंख्याले कृश्चियन धर्म मान्छन ।कसैले यशु कृश्ट त कसैले बौदिश्ठ भन्छन अनी कसैले हिन्दु सनातनवादी त कसैले प्रमेश्वर आझै नयाँ नयाँ धर्म भित्र्याउदै कसैले सच्चाई त कसैले झुट ।
तर जस्ले जे भने पनी हिन्दु धर्महरुको आफ्नै बिशेसताहरु छन् । हिन्दु धर्म परापुर्व काल देखीनै बिशवास गरेको पाईन्छ ।आज हामी यही हिन्दु धर्मको वास्तबिकता देखाउन एउटा मन्दिर मा लगरे जाँदैछौ तपाईलाई बाँकी विवरण भिडियो बाटै हेर्नुहोस:-